You must serve one term: President-elect Mnangagwa told – The Observer
Home/News/You must serve one term: President-elect Mnangagwa told
Outspoken South African politician, Julius Malema says Emmerson Mnangagwa, just declared President in Zimbabwe after elections on Monday, must serve one term and “let the younger generation take over”.
“Let Zanu-PF begin a process of producing younger people who will compete with Chamisa. President Mnangagwa this is a brotherly advice, a son’s call that says one term is enough, you are too old, let the younger generation take over.”
Malema has not hidden his support for Zanu-PF in the past, and previously urged former President Robert Mugabe to quit for a younger leader. Mugabe, who did not heed the advice, was swept away in a military coup in November 2017 led by Zimbabwe’s new Vice President Constantino Chiwenga, who was then army commander.
Chamisa reveals plot to assassinate him